William Gallas Oo Shaaca Ka Qaaday Daafac Arsenal Oo Si Weyn Uga Baqi Jiray Kana Argagixi Jiray Inuu Ka Horimaado Xiddigii Chelsea Didier Drogba | Laacib.net
Didier Drogba ayaa qarow ku ahaa xiddigaha ka horimaanayay madaama uu isku darsaday xoog, orod iyo dhameystir fiican, waxa uu ahaa gooldhaliye dhameystiran waxaana uu taas soo bandhigay waqtiyo badan intii uu joogay Chelsea.
Dabcana kooxda uu ugu jeclaa inuu ka horyimaado waxay aheyd Arsenal. 15 kulan uu la ciyaaray Gunners tartamada oo dhan waxa uu weeraryahanka Ivory Coast ka dhaliyay 13 gool iyadoo kaliya laga badiyay hal kulan oo uu ka hor yimid kooxda Arsene Wenger.
William Gallas oo ka garab ciyaaray Drogba islamarkaana la qaaday horyaalka Premier League ayaa markaas ka dib wajahay dhibaato ah inuu kubad ka difaacdo markii uu u wareegay Waqooyiga London.
Laakiin ninka reer France ayaa shaaca ka qaaday in xiddigii ay daafaca dhexe kawada ciyaari jireen Philippe Senderos inuu si dhab ah uga baqi jiray inuu ka horyimaado Drogba, waxaana uu ahaa mid isku dardarsama ka hor inta aysan bilaabanin ciyaarta.
“Waxaan ogaa Philippe Senderos oo ciyaarta ka hor u baahan inuu wax badan hadlo, waad arki kartay inuu dhididayo, inuusan dareen fiican ku jirin” ayuu Gallas u sheegay RMC.
“Wuxuu sidaas sameyn jiray marka uu ciyaartoyda qaar ka horimaanayo. Marka uu ka horimaanayo Chelsea gaar ahaan Didier Drogba waxaa ku dhici jiray argagax, waxayba u ekeyd inuu kulanka ciyaarayo ka hor inta aan la gaarinba.
“Nasiibdarro marka uu garoonka soo galo waxa u dhumin jiray awoodiisa ciyaareed, laakiin marka uu kooxdiisa tababarka kula dheelayo waxa uu ahaa mid aad u fiican.”
Daafaca reer Switzerland ayaa in ka badan 100 kulan u saftay Arsenal tan iyo markii uu tagay 2003dii mana uusan ku najixin Gunners.
Waxaa amaah lagu siiyay AC Milan iyo Everton, waxaana uu 2010kii ku biiray kooxda Fulham ka hor inta uusan u ciyaarin Valencia, Aston Villa, Grasshopper, Rangers iyo kooxda Mareykanka ee uu haatan la joogo ee Houston Dynamo.